ရွှေအတုမဟုတ်ပါ သို့သော် !! ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွှေအတုမဟုတ်ပါ သို့သော် !! ?
ရွှေအတုမဟုတ်ပါ သို့သော် !! ?
Posted by မောင်ရိုး on Feb 3, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 23 comments
တနေ့က အလုပ်ကအိမ်ပြန်ရောက်တော.သတင်းဆိုးတခုကြားရတယ် ။ ဆာမိရဲ.မိတ်ဆွေတယောက်ရွှေအတုပေါင်နှံမှုနဲ့
အဲဒီနေ. နေ.လည်လောက်မှာပဲဆာမိရဲ.မိတ်ဆွေကသူ.ရဲ.၅ပဲသားလောက်ရှိတဲ.မောင်းကွင်းလက်စွပ်ကိုငွေ ၁၀၀၀၀၀ နဲ.ပေါင်ပါတယ်။ဆိုင်ကလည်း ယူတဲ.ငွေနဲ.ပေါင်တဲ.ပစ္စည်းကပိုတန်တော.ချက်ချင်းပဲငွေထုတ်ပေးလိုက်တယ်–ဒါနဲ.ဘောက်ချာ
ရေး လက်ဗွေလဲနှိတ်ပြီးရော–ရွှေအတုပေါင်ပါတယ်ဆိုပြီးရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားသတဲ. –ဆာမိရဲ.မိတ်ဆွေကလည်းသူ.
ရွှေအတုသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုရင်းရဲစခန်းရောက်ခဲ.ကြပါတယ်—- ဆာမိအဖေါ်ခေါ်လာသူကပန်းတိမ်ဆရာပါ–ဆာမိသူငယ်ချင်းပဲဆိုပါတော.—-သူကလက်စွပ်ကိုယူကြည်.ပြီး—ဆာမိကိုလက်တို.ပြီးပြောပါတယ်–မြန်မြန်တောင်းပန်ြပီး ပြဿနာရှင်းခိုင်းပါတယ် ၊ ပြီးမှ သူရှင်းပြမယ်ပေါ.—-ဒါနဲ.ဆိုင်ရှင်ကိုတောင်းပန်ပြီး ခံဝန်ချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြရပါတယ် —ဆာမိရဲ.မိတ်ဆွေကတော.
ကိစ္စပြီးတော. ည ၇ နာရီကျော်ပြီ ။ ဗိုက်ဆာနေတဲ.ဆာမိတို.လည်း အဲဒီမြို.သစ်မှာပဲညစာစားဖို.စီစဉ်ရင်း
ဒီလိုပါ — အဲဒီလက်စွပ်ကအတုပါလို.တိုက်ရိုက်ပြောဖို.ခက်ပေမဲ.—အတုပါပဲ ။အတုဝယ်မိသလိုပဲဝယ်သူကို
၁၁ ပဲ ၂ရွေးပါရင်ငရဲမီးနဲ.တို.လည်းဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲပါဘူး—အဲဒီအနေအထားဆိုရင်သူတို.က “မီးလွတ်ရည်”လို.
ခေါ်ကြပါတယ် အဲ–ရွှေရည် ၁၁ ပဲ ၂ ရွေးအောက်ရောက်ရင်တော. ငရဲမီးနဲ.ထိရင် အရောင်ပြောင်းခြင်းနဲ.ညှော်နံ.
တွေထွက်လာပါတယ်–ဒီလိုအနေအထားဆိုရင် မီးမလွတ်ဘူးလို.ပြောကြပါတယ်—ဒီတော.ရွှေရည် ၁၆ ပဲ ကနေ
၁၁ ပဲ ၂ရွေးအထိ ငရဲ မီးနဲ.ဘယ်လိုမှဓတ်မပြုပါဘူး ။အခုပစ္စည်းက ကြိုက်သလိုငရဲမီးနဲ.တို.ပြီးငရဲမီးခွက်ထဲပါစိမ်ထား
ရွှေအတုဆိုတဲ.နေရာမှာအများသိပြီးတဲ.အတိုင်း ရွှေရည်စိမ်နဲ.၊ ထပ်ထည်လို.ခေါ် တဲ.
အပြင်ကရွှေ အထဲကကြေး (သို.) ဘော်ကိုထည်.ထားတဲ.အတုများသာကြားဘူးကြမှာပါ။ ဘော် ဆိုတာကငွေအခေါက်
လည်းဒီပစ္စည်းမျိုးအခုမှတွေ.ဘူးတာ ၊ဘယ်လိုစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတာဘယ်သိမလဲ ။ဒီတော. ဒီပစ္စည်းမျိုးလုပ်တဲ.သူတွေမှာ
ထားဝတ်ဆင်ထိန်းသိမ်းရင်း—အပေါင်ဆိုင်ရောက်တော.မှပဲ မိအေး ၂ခါနာရပါတော.တယ်။။။။။
ကဲဗျာ –ဒီလက်စွပ်လေးဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာပြောကြပါစို.—ဆာမိတို.ရဲ. မြန်မာ.ပန်းတိမ်လုပ်
နည်းအရရွှေထည်ပစ္စည်းလုပ်ရင်ကြေး ဘော် တို.ကိုအချိုးကျ ပေါင်းစပ်ရပါတယ်။ကြေး ဘော် ထဲ.တဲ.အချိုးအစားကိုမူတည်
ပြီး “အငန်စပ်၊အဖန်စပ်” လို.ပြောကြတာယ်–ကြေး များရင်ငန် ပြီး ဘော်များရင်ဖန်တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ငန်တယ်ဖန်တယ်
လွိုင်းကိုရောထည်.ပြီးစပ်ပါတယ်။ဆာမိတို.ကရွှေရည်ကို ၁၆ပဲ ၊၁၅ပဲ —–၁၂ပဲ စသည်ဖြင်.သတ်မှတ်သလိုနိုင်ငံတကာအ
နေနဲ.ဆိုရင်လဲ 24K –22K ——18Kစသည်ဖြင်.သတ်မှတ်ပါတယ်။18Kဆိုတာ ၁၂ပဲရည်ကွက်တိပါပဲ ။အခုလက်စွပ်
ဆာမိမိတ်ဆွေဆီ ဒီပစ္စည်းရောက်လာတာကလည်း သူ.မိန်းမကလမ်းလျှေက်ပွဲစားတွေဆီကအလျော.
တွက်သက်သာတယ်ဆိုပြီးဝယ်ထားတာပါ ။ ဆာမိအမြင်မှာတော.ရွှေအတုလုပ်တဲ.သူတွေ၊အဖွဲ.လိုက်ရှိနေတာပါပဲ။
လွန်ခဲ.တဲ. ၂ နှစ်ကျော်လောက်တုန်းကလည်းမင်္ဂလာဒုံဘက်မှာရွှေဆိုင်တော်တော်များများဒီလိုအတုတွေကိုဝယ်မိလိုက်သေး
ပါဘူး—–ရွှေရည်စစ်တဲ.စက်ဆိုတာ အာခိမီးဒီး ရဲ.သီအိုရီကိုအခြေခံပြီးသိပ်သည်းဆကိုစစ်တာကြောင်.ပါ ။
ကီလိုရွှေ ၁၉.၃၂ ၊ အကယ်ဒမီ ၁၉.၂၄ ခန်. ဘသန်း ။ရွှေနဂါး ၊အောင်သမာဓိ ၁၉.၂—ခန်.
ဆိုင်များမှလုပ်တဲ.အခေါက်လို.ပြောနေကြတဲ.ပစ္စည်းတွေကတော.၁၉.၀—(သို.)၁၈.၈၈ ။၁၂ ပဲရည်ကတော.
၁၅.—-ခန်. ဒါကြောင်.၁၄ (သို.)၁၃ အောက်ဆိုရင်ရွှေပါဝင်နှုံးအရမ်းနည်းနေလို.ပါပဲ ။ဘော် ရဲ.သိပ်သည်းဆ
က ၉.၂၅ ပါ ဒါကြောင်.ငွေထည်တွေကို 925 လို.ခေါ်တာပေါ.—
ဒီလိုနဲ. စားပြီးတော.ဆာမိတို့လည်းပြန်ခဲ.ကြပါတယ်–အပြန်လမ်းတလျှေက် ဧည်.ခံကျွေးမွေးစားရိတ်
ကိုဒကာခံ ၊ငွေလိုနေတဲ.ဆာမိမိတ်ဆွေကိုလည်းငွေချေးပေးခဲ.ရင်း အိမ်က လေဒီဆာမိကိုဘယ်လိုများစာရင်းလိမ်ရမလဲလို.
အလွိုင်းရွှေတုကို စစ်တဲ့နည်းရှိပါတယ်။ လူသိနည်းပါတယ်။
ကြားဘူးထားတာ အခုမေ့နေလို့ ။ တနေ့ကြုံရင်ပြောပါမယ်။
ရွှေတုမမိချင်ရင် အကောင်းဆုံးကတော့ ရွှေကိုမ၀တ်ပဲ ကိုရီးယားလို ဖန်စီတွေပဲဝတ်ရင်
ခေတ်လဲမီ၊ ပိုက်ဆံလဲ အကုန်သက်သာမယ်။
တကယ်တော့ ရွှေက အစားထိုးလို့မရတဲ့ စက်မှု့ကုန်ကြမ်းတမျိုးပါပဲ။
အခုစာရိုက်နေတဲ့ကွန်ပျူတာထဲက ဆားကစ်တွေထဲမှာလဲ ပါတာပေါ့။
အဲဒါ ရွှေမ၀တ်လို့ ရွှေဈေးကျသွားရင် – ကုန်ကြမ်းအဖြစ်ဈေးပေါပေါသုံးရတာပေါ့။
ဦးပါရေ –ကျေးဇူးပဲ ကြားဖူးထားတာလေးသတိရရင်လုပ်ပါဦးနော။
ကျေးဇူးပါ ဆာမိလေးရေ …..
တစ်ချို့ တွေကျတော့ အိုစာမင်းစာဆိုပြီး ရွှေဝယ်စုကြတာ။
အဲဒီလိုမျိုးများ အတုဆိုရင် လိုလို့ ထုတ်ရောင်းချိန်ကျ ငိုကြရတော့မှာ။
ကိုယ်ချမ်းသာဖို့ ချမ်းသာပြီးရင်းချမ်းသာရင်း အတွက် ဘဲ ကြည့်နေကြတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ရှိနေသမျှတော့ မရှိဆင်းရဲတဲ့ လူတွေ၊ ရိုးသားတဲ့သူတွေ ဘဲ ထပ်ထပ်ဆင်းရဲ နေရမှာပါဘဲ။
ဘယ်လို ရုန်းတက်လို့ ရကြပါ့မလဲ။ :-(
Post လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ဆာမိရေ။
ရွှေဝယ်တဲ့အခါ သက်သာရင်ပြီးရောဆိုပြီး အလွယ်လမ်း သက်သာတယ်ဆိုတဲ့လမ်း
အာမခံချက် အပြည့်အဝ ရှိတဲ့ ရွှေဆိုင်မျိုးမှာ သာလျှင် ဝယ်ယူသင့်ပါကြောင်း
ရွှေအကြောင်း ဖယောင်းသက်သေ ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးတော့ ကြားဖူးတာပဲ။
ရွှေအကြောင်း ဖယောင်း သက်သေ ဆို…
လူအကြောင်း ….အင်း လူအကြောင်းကတော့ …နှာခေါင်းသက်သေဆိုလား …
သေသေချာချာ တော့ မသိ ဘူး မမ ရဲ့။ ကြုံဖူးတာလေးတော့ ပြော ပြမယ် နော်။
မော်လမြိုင်ကျွန်း မြီု့ လောကသကျ မာရဇိန် ကြေးသွန်းဘုရား တန်ဆောင်း တိုင် တွေ မှာ ရွှေရည်သုတ် ထားတာ ( ၁၉၉၀ခု ၀န်းကျင်ခန့် က) ကို သူခိုးက ဖယောင်းနဲ့ လိမ့် သွားတာ တဲ့ အပေါ် အောက် အမြောင်း လိုက် အစင်း ရာ ဖြစ်ပြီး ရွှေရောင် တွေ ပျက်နေတာ တွေ့ဖူးတယ်။
လူကြီးတွေ က ဂေါပက တစ်ယောက် ကို မေး တော့ ရိုးရိုး ဖယောင်း နဲ့ လိမ့် လို့ မရဘူးတဲ့၊ ပျားဖယောင်းနဲ့ လိမ့် ယူသွားတာ ဖြစ်လိမ့် မယ် လို့ တော့ ပြောတာပဲ။
ကျုပ်တော့ ရွှေ ဆိုရင် ဘာရွှေမှမကြိုက်တော့ဘူးဗျာ..စိတ်နာလို့..
ရွှေမ၀တ်တော့ဘူး။ ဦးဦးပါလေရာပြောသလိုဖန်စီပဲဝတ်တော့မယ်။ ဒါပဲတတ်နိုင်တာကိုး။း)
မြန်မာပြည်မှာက ပိုက်ဆံရှာရတာခက်တော့ လူတွေလဲ မရိုးသားချင်ကြတော့ဘူးနော်
“ရွှေ ဆိုရင် ဘာရွှေမှမကြိုက်တော့ဘူးဗျာ..စိတ်နာလို့..“ဆိုတော့ စိန် ရော ကြိုက်ရဲ့လား
ကျေးဇူးဗျာ ကိုဆာမိ အခုလို ရွှေအစစ်နဲ.မခြား အတုကို သေသေချာချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ. ပို.စ်တင်ပေးထားတာ တကယ်ဗဟုသုတ ရတယ်.. ဒါအပြင် ကိုယ်လည်းသိသွားတော့ အလိမ်မခံရတော့ဘူးပေါ့…
အခုမှပဲ အဲဒီအကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတော့တယ်…. အဲဒါကြောင့် သေချာစစ်ဆေးပြီးမှဝယ်သင့်တာပေါ့နော…
ကိုဆာမိရေ ကျွန်မက ရွှေကြောင်း ဂဃနဏ မသိပါဘူး ။ ပဲတွေ ၊ ရွေးတွေလည်း မတွက်တတ်ပါဘူး ။
16ပဲရည်ဆိုလျှင် အခေါက်ရွှေဆိုတာလောက်ပဲ နားလည်တယ် ။ ရွှေစုတာလည်း ၀ါသနာ မပါလို ၊ ရွှေဝတ်တာလည်း ၀ါသနာ မပါခဲ့ဘူး ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတော့ ဖန်စီတွေ ၀တ်ရတာ ၀ါသနာ ထုံခဲ့ပြီး တွေ့သမျှ လိုက်ဝယ်စုတတ်ခဲ့ပေမယ့် အခုအရွယ်မှာတော့ အဲ့ဒါတွေဝတ်ရတာလည်း ၀ါသနာမပါပဲ အိမ်ရှုပ်သလို ဖြစ်နေခဲ့ပြီ ။ ပွဲလန်းသဘင်တွေမှာ ရွှေထည် ၊ကျောက်ထည်တွေကို အမြတ်တနိုးဆင်ယင်တတ်ပေမယ့် .. အမြဲတမ်းဝတ်ထားဖို့ကတော့ … စိတ်ထဲ အောင့်သက်သက်နဲ့ … ။ မလွတ်လပ်သလိုချည်းခံစားရတယ် … ဒါကြောင့် နာရီတောင် မပတ်ဖြစ်ဘူး ။
တကိုယ်လုံးမှာ ရွှေဆိုလို့ ဒီနှစ်အတွက် အမေမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ 16ပဲလက်စွပ်လေးတစ်ကွင်းနဲ့ နေနံအရ မြဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ အဖွားပေးထားတဲ့(ဘယ်နှစ်ပဲလည်း မသိဘူး ) နားကပ်တစ်စုံပဲ ရှိတယ် ။
ကျွန်မတို့လို ရွှေအကြောင်း သိပ်မသိတဲ့ လူတွေ အတွက် ကိုဆာမိရဲ့ ပို့စ်လေးတွေက ဗဟုသုတရစေပါတယ် …များများလည်းရေးပါဦးနော် ။
မှတ်မှတ်ရရ ရွာထဲမှာ ရွှေကြောင်းရေးတာဆိုလို့ … ကိုဆာမိနဲ့ … ရွှေကြောတွေ့တဲ့ ကိုဘုန်းကျော်ပဲ ရှိမယ် ထင်တယ် … ။
အခုမှပဲ အလွိုင်း နဲ့ရွှေရောတာ ကြားဘူးတော့တယ်
ဒါကြောင့်မို့ဆိုင်မှာ လုပ်ပြီးသားအထည်တွေ မ၀ယ်ချင်တာ
ရွှေစုချင်သူများအတွက်တော့ အောင်သမာဓိ/1.25လို ဆိုင်ကြီးတွေမှာ
ဟိုက် ဆာမိပြောမှဘဲ ရွှေကိုအတုပီသအောငိလိမ်ထားပုံကိုသိရတော့တယ်။
ဒီလိုမျိုးတွေ နယ်ဖက်ကိုရောက်လာရင် အားလုံးစစ်မယ့်သူ၊စက်တွေလဲ
မရှိတော့ ဆုံးရှုံးကြမှာဘဲ။သတိပေးရမယ်ဗျို့ ။ကျေးဇူးပါဗျာ။
surmi ရေ post အတွက် ကျေးဇူးပါ..
ရွှေဝယ်ရင်တော့ ၀ယ်နေကျ ဆိုင်ကပဲ ၀ယ်ဖြစ်တာ များတယ်။ ဆိုင်ဘောက်ချာနဲ့ ပြန်ရောင်း ပြန်ဝယ် လုပ်ပေးတာပဲ.. တခါမှ အဲလိုမျိုးတော့ မကြားဖူးဖူး။
နောက်ပိုင်း ရွှေသိပ်မ၀ယ်ချင်တော့ဘူး စိန်ဝယ်ချင်နေတာ.. ဟိဟိ.. စိန် အကြောင်းလေး ဘာလေး သိလား.. နည်းနည်း ပြောပြပါအုန်းနော်။ ဗဟုသုတလေး ဘာလေး ရအောင်..
တုပ လိမ်လည် ပုံမှားရိုက်သူများအတွက်ဥပဒေသီးသန်.ပြတမ်းပြီး
——- — ————————-ပြီး
ကျွန်တော့်လို ရွှေဆိုတာ အဝါရောင် လို့ ဘဲ သိထားတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ ၊ အကို့ ပို့ စ် က ပြည့်စုံ ပါတယ် ခင်ဗျာ
ရွာသူမမများစိတ်ဝင်စားကြတဲ. စိန် ကတော.ဂျလေဘီသယ်ဆာမိပိုက်ဆံစုနေလို.
awra-cho ရေ စိန်ကိုတော့မမေးနဲ့ ဗျို့ ..သားသားကြိုက်ကြိုက်..အရမ်းကြိုက်..ဟီးဟီး
ရွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ၀ယ်နေကျ ဆိုင်ကပဲ ၀ယ်ဖြစ်ပြီး
ပြန်ရောင်းလည်း ဆိုင်ကပဲ ပြန်ဝယ်ပေးတော့ တစ်ခါမှ
ဒီလိုမျိုးတော့ မကြုံဖူးမကြားဖူးသေးဘူး အခုလိုဗဟုသုတ ရမယ့်
ပိုစ့်လေးကို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော် ….